MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-03-03
at 3/09/2013 01:57:00 PM No comments:
ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန မတ်ခ်ျလ ၈ ၊ ၂၀၁၃
လာမည့် မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် KIA နှင့် အစိုးရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ၀ ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မ တော် (UWSA) ၏ ကိုယ်စားလည်လည်း တက်ရောက် လေ့လာမည်ဟု KIA ထိပ်တန်း အရာရှိ တဦးက ရွှေဟင်္သာသတင်း ဌာနအား ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
“ ကချင် စစ်ပွဲကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေလည်း နိုးကြား လာခဲ့ပါပြီး၊ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်လို့ မပါတ်သက်ချင်လည်း မရဘူးဆို တာ ကချင် တိုက်ပွဲတွေက သက်သေဘဲလေ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ UWSA ပါ တက်ရောက် လာတယ်လို့ကြားရတော့ ၀မ်းသာ စရာပါ။ တကယ်တော့ UWSA ဟာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ လက်နက်ကိုင် အင်အား အကြီးဆုံးပါ။ သူတို့အ နေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေးတွေမှာ ပါဝင် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်” ဟုဆိုပါသည်။
at 3/09/2013 01:44:00 PM No comments:
at 3/09/2013 01:43:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့ တရုတ်နယ်စပ် မုန်ဂါဇွပ် (Mungga Zup) ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်များအခက်ခဲဖြစ်နေသောကြောင့် ရေသုံးစွဲမှု မလုံမလောက်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
၎င်းစခန်းတွင် အိမ်သာရေမှအစ အခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရခြင်းကြောင့် ဒုက္ခသည်များ၏ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းများမှ ရောဂါလက္ခာ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားလာမည်ကို ကျန်းမာရေး ဌာနမှစိုးရိမ်နေကြောင်း ဒုက္ခသည်ကြည့်ရှုနေသူတစ်ဦးပြောသည်။
at 3/09/2013 01:39:00 PM No comments:
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် လာမည့်KIA နှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် အပေါ် စီးရရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖိအားပေးသည့် အနေဖြင့် စစ်ရေး တိုးချဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက် နေကြောင်း KIA ရှေ့တန်း တပ်မှူး တဦးက ဆိုပါသည်။
“ ဖိအားပေး နေတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲက တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲလေ။ ဒီအခွင့်အရေး ရဖို့ တိုက်နေတာ အနှစ် (၆၀) ကျော် လာပြီး မဟုတ်လား။ ဒါကို စစ်ရေးနဲ့ ဖိအားပေးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ KIA က တော့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာတဲ့ နည်းကို အမြဲတမ်း တံခါး ဖွင့်ထား ပါတယ်။ အစိုးရက ဆွေးနွေးရင် KIA ကလည်း နိုင်ငံရေး အရ ဆက်ဆွေးနွေးနေမှာဘဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အဖွဲ့တွေ အများကြီးပါ။ တသံထဲဖြစ်ဖို့ ညှိနှိုင်းရ မယ်လေ။ ဆိုတော့ အချိန်တော့ ပေးရမှာပေါ့။ ဒါကို စစ်ရေးနဲ့ ဖိအားသုံးပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲအောင် လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ မျှတလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည်။
at 3/08/2013 07:02:00 PM No comments:
at 3/08/2013 11:59:00 AM No comments:
ကက (ကြည်း) လေးလပတ် စစ်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးမှာ တပ်များ အရွေ့အပြောင်း လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားလာတဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ရုံးနဲ့ နီးစပ်သူများမှ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အခုလို သတင်း ပေးပို့ပါတယ်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်ဟာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA နဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် တပ်မများကို အပူတပြင်း ဆွဲသွင်း နေရကြောင်း ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ တပ် ချုပ်ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့ သတင်းလို့ ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမှီ ကာလကမှ ကင်တားနား ရောက်နေတဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည် နယ်က တပ်မများ ကိုလည်း ယခင်ကလို ဆွဲမထုတ်ရဲဘဲ အသင့်အနေ အထားသာ စောင့်နေခိုင်းရပါတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ အိန္ဒိယ - မြန်မာနယ် စပ်ရှိ တမူးမြို့မှာလည်း ဗုံးကွဲပြန်ရာ နယ်စပ် လုံခြုံရေး ခြံစည်းရိုး ကျိုး ပေါက်မဲ့အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
at 3/08/2013 11:57:00 AM No comments:
at 3/08/2013 11:48:00 AM No comments:
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)၏ တပ်မဟာ (၁) တပ်ရင်း (၁၀) နယ်မြေ ချီဖွေ-လောခေါင် နှင့် ပန်ဝါဒေသတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့သည် ရဟတ်ယာဉ်များနေ့စဉ်အသုံးပြု၍ စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေကြောင်း ဒေသခံများမှသိရသည်။
အစိုးရတပ်သည် ပန်ဝါ (Pangwa)နှင့် လုပီ (Lupi) စခန်းသို့ ရဟတ် ယာဉ် များဖြင့် စစ်လက်နက်အင်အားများ တိုးချလာခြင်းဖြစ်ပြီး မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရဟတ်ယာဉ်အသုံးပြုမှု ပိုစိပ်လာသည်ဟု မျက်မြင် ဒေသခံများပြောသည်။
at 3/08/2013 11:40:00 AM No comments:
at 3/07/2013 04:26:00 PM No comments:
at 3/07/2013 04:23:00 PM No comments:
at 3/07/2013 03:50:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/ KIA daju Laiza Mare hta March (4) ya shani Hpa-Awn Dap Shawa Zuphpawng hpe galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai Zuphpawng hpe Laiza Rawt Ninghkawng Gawknu kaw March (4) ya jahpawt hkying (10:00AM) ten hta galaw ai rai nna, Du Kaba Chyana Zau Awn kawn zuphpawng hpa-awn hku lit la woi galaw wa sai lam na chye lu ai.
Mungdan Shanglawt Hpung, Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw, Sadung Ginwang Laksan Ka-ni Nang Hpam Pat Jasan Komitiamasing hte Sadung Ginwang kata masha shang n manu ai, N-Myen Hka, Hka Deng Pai Hkra, Krung Sin Wa kaw lagu chye hkai da ai Ka-ni Yi, Yi baw (28) (E-Ka – 20) hpe Sadung Ginwang Labu Pan Hpyen Hpung ni kaw nna, Ninghtoi;- 15-2-2013 to 4/3/2013 ya lapran atsai awai hkyen, baw shamyit kau lu sai lam shiga na chye lu ai.
at 3/07/2013 03:47:00 PM No comments:
at 3/07/2013 03:46:00 PM No comments:
at 3/06/2013 07:59:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Dingdung Ginwang Ginjaw, Mungchying Uphkang Dap, Daru Bum Ninghtawn Uphkang Rung magam gun ni kaw na Ginwang kata lagu hkai sha nga ai ka-ni yi ni hpe sa hkyen jahten kau ya lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Sumpra Bum Modo lam sinna hkran Lung Hkat Bum lagaw grup yin ni hta lagu galaw tawn ai Ka-Ni sun Eka (7) ram hpe lai wa sai 2013 February (19- 21) ya laman sa du jep chyoi mu hkrup ai majaw hkyen jahten kau ai lam galaw lai wa ai re lam hpe mung na chye lu ai.
ကေအိုင်အိုအစိုးရမှ ဘိန်းခင်း (၇) ဧကခန့်ကို ဖျက်ဆီး
မတ် (၆) ဗုဒ္ဓဟူး
at 3/06/2013 11:47:00 AM No comments:
at 3/06/2013 11:44:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးကြီးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မူဝါဒတွေ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးအတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း EU ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဖိအားပေး တိုက်တွန်း သင့်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW က မတ်လ ၅ ရက်နေ့ ဒီကနေ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ EU အဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ် ဆဲလ်မြို့မှာ ဒီကနေ့ EU ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ EU ပါလီမန် ဥက္ကဋ္ဌ Martin Shulz၊ ဥရောပကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ Jose Manual Barroso၊ ဥရောပကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ Herman Van Rompuy နဲ့ EU နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Catherine Ashton တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ကေအိုင်အိုတို့ဟာ လာမည့်မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့နဲ့ ၁၁ ရက်နေ့တွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့မှာ ထမ်မံတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာ အစိုးရဘက်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ တပ်မတော်အရာရှိကြီးတွေ တက်ရောက်ဖို့ရှိကြောင်း သမ္မတရုံးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက RFA ကို အတည်ပြုပြောကြားပါ တယ်။
at 3/06/2013 11:26:00 AM No comments:
at 3/06/2013 11:20:00 AM No comments:
at 3/05/2013 08:56:00 PM No comments:
at 3/05/2013 08:55:00 PM 17 comments:
at 3/05/2013 08:53:00 PM No comments:
at 3/05/2013 11:25:00 AM No comments:
at 3/05/2013 11:19:00 AM No comments:
at 3/05/2013 11:18:00 AM No comments:
မတ်လ (၄) ရက်နေ့၊ ရွှေဟသာင်္သတင်းဌာန
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ကံစီ ဒေသတွင်းရှိ ဒေသခံ ကျေးရွာများ၏ ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းအား အဓမ္မ သိမ်းပိုက်ပြီး မတန်တဆ ပြန်ရောင်းစား နေကြကြောင်း ပစ္စည်း အသိမ်းခံရသော ကံစီ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
“အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့ သူတို့က ဒီဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်း ကျေးရွာ အုပ်စုမှာ ရှိတဲ့ မောရှမ်း၊ ကံစီ၊ မိုဇာကြီး ကျေးရွာတွေကို ကျေးရွာ လုံခြုံရေး ယူပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ ညပိုင်းမှာ ကင်းစောင့်ပေးတယ် နေ့ခင်းပိုင်းဆိုရင် ရွာထဲမှာရှိတဲ့ အကောင်းစား အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ လိုက်သိမ်းတယ်ပြီးတော့ တခြား တနေရာကို ကားနဲ့ သယ်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်း စား လိုက်ကြတယ်။ သူတို့က စိတ်ထင်တိုင်း ကျဲနေတော့ ရွာသားတွေက ဘာမှ မပြောရဲကြဘူး။ ရွာထဲက ပြန်ရောင်စား လို့ရတဲ့ ပစ္စည်း မှန်သမျှ အားလုံးကို သယ် သွားခဲ့ကြတယ်လို့” ဆိုပါသည်။
at 3/04/2013 11:58:00 PM No comments:
ရွှေဟသာင်္သတင်းဌာန၊ မတ်လ(၄) ရက်နေ့
at 3/04/2013 11:57:00 PM No comments:
at 3/04/2013 11:54:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်ကနေ လိုင်ဇာမြို့ကို လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့မှာ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းသူတွေ ပိုများလာပြီး ဒီကနေ့ သံဃာတော် (၂) ပါး ခြေထောက်ဒဏ်ရာ ရရှိတဲ့အတွက် မြစ်ကြီးနားဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သံဃာတော်တွေကို ဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ကိုဇင်ကိုကိုက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
at 3/04/2013 11:53:00 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ကနေ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ချီတက်လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ဟာ ဟိုပင်မြို့ကနေ ၉ မိုင်ကွာဝေးတဲ့ မိုးကောင်းမြို့နယ် ထုံးရေပေါက်ကျေးရွာ ကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့ထဲက အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် က ရေကျောက်ပေါက်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ အူကျဝေဒနာ ခံစားနေရတာ ကြောင့် ဒီကနေ့ မြစ်ကြီး နား ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူ နေရ တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ မိုင် ၁၀၀ လောက်ကွာဝေးတဲ့ မိုးညှင်းမြို့နယ် ဆေးရုံက တဆင့် မတ်လ ၁ ရက်မနေ့ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံကို သယ်ဆောင်ဆေးကုသ ပေးနေရတာလို့ လူနာနှစ်ယောက်နဲ့ အတူ လိုက်ပါလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့မှ ကိုဇင်ကိုကိုက ကျန်းမာ ရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
at 3/03/2013 04:11:00 PM No comments:
မြန်မာအစိုးရပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီနဲ့ စစ်အရှိန်လျော့ချဖို့ သဘောတူညီချက် ရရှိထားတဲ့ ကေအိုင်အိုခေါ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်က တပ် စခန်းတွေကို အစိုးရစစ်တပ်ကနေ တိုက်ခိုက်နေဆဲလို့ ကေအိုင်အိုဘက် က ပြောပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဒေသခံကျေးရွာသားတွေ တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဒဏ်တွေ ခံခဲ့ရသလို အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးပမ်းနေဆဲကာလမှာ စစ်အရှိန် တိုးမြင့်အောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ် စိုးရိမ်စရာအနေအထားရှိနေတယ် လို့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေကလည်း ပြောကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ချီဖွေနဲ့ လောခေါင်ဇုံနယ်မြေမှာရှိတဲ့ ကေအိုင်အိုခေါ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ တပ်စခန်းကို မြန်မာစစ်တပ် တွေက ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲအခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။
at 3/03/2013 04:10:00 PM No comments: